के हो5G ? « LiveMandu
के हो5G ?
२८ पुष २०७५, शनिबार ००:१५
फोन र हाम्रो सम्बन्ध निकै पुरानो र निकै मजबुत पनि छ । पहिले तारवाला फोनको प्रयोग हुदै काँर्डलस र त्यसपछि वायरलेसको प्रचलन शूरु भयो । फोन जगतमा भएको यो परिवर्तन सँगै रुप रङको साथै त्यसको जेनेरेशन पनि जोडिन थाल्यो १ जि हुदै ४ जी सम्म आइपुग्दा निकै परिवर्तन देखेका छौ । अब केही समयमा नै ५ जिको पनि अनुभव लिन पाउने पक्का छ । अमेरिका ले हुवावेमाथि लगाएको प्रतिबन्धको कारण पनि ५ जि सेवा रहेको कयौ प्रविधिकहरुको अडकल छ । आउनुहोस यही ५ जिको बारेमा केही जानकारी हरु बाडौ ।
मोवाइल नेटवर्कमा ५ जि अर्थात पाचौ जेनेरेसन छिट्टै लन्चहुने खबर आइरहेको छ । ५ जिको स्पीड र कनेक्टिविटीको कुनै लिमिट नहुने र उर्जा समेत कम खपत गर्ने विश्वास गरिएको छ । ५ जिको लागि विभिन्न विभिन्न कम्पनीहरु बिच दौड शूरु भएको छ । अत्यधिक क्षमताको यस नेटवर्कबाट रिमोट सर्जरी तथा सेल्फ ड्राइभिङ्गकारमा समेत निकै ठुलो भुमिका खेल्ने छ । अब छिट्टै नै ५ जि नेटवर्क विश्व बजारमा अनुभव गर्न पाइने छ ।
छन् को अर्थ हो टेलिकम जगतको पाँचौं पिढी जसमा अघिल्लो संस्करण अर्थात् फोरजीको तुलनामा इन्टरनेट स्पिड र अन्य थुप्रै कुराहरुमा सुधार हुनेछ फाइभ जीको फाइदाहरु यस्ता रहेका छन्
तेज गतिको स्पिड
फाइभजीले राम्रो नेटवर्क कभरेज भएको क्षेत्रमा १ जीबीपीएससम्मको इन्टरनेट स्पिड प्रदान गर्न सक्नेछ तुलनाका लागि हालै नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने फोरजीको स्पिड हो ३० एमबीपीएस ( फाइभजीभन्दा ३० गुणा कम )
सर्भर र प्रयोगकर्ता बीचको संचारमा हुने ढिलाईलाई लेटेंसी मार्फत मापन गरिन्छ( जति कम लेटेंसी त्यति नै राम्रो नेटवर्क ५ जिको लेटेंसी १ मिलीसेकेन्डसम्म कम गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ तुलनाका लागि फोरजीको लेटेंसी हो ५० मिलीसेकेन्डको ( फाइभजीभन्दा ५० गुणा धेरै))
फाइभजीको सहयोगबाट टेलिकमले कुनै पनि क्षेत्रमा धेरै मात्रामा उपकरणहरुसँग संचार गर्न पाउने छ एक किलोमिटर स्क्वायर क्षेत्रफलमा मात्रै पनि १० लाख वटा उपकरणहरु चल्न सक्नेछन्य यहि कारणले नै गर्दा फाइभजीले इन्टरनेट वफ थिन्ग्स अर्थात् उपकरणहरुको इन्टरनेटमा विकास गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरि एको छ ।
सकारात्मक सोचका साथ समृद्धि अभियानमा लाग्न मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी युवाका लागि नेपालमै उपयुक्त वातावरण बनाउने सरकारको